चीनसँग कारोवार गर्ने १५० व्यापारीहरु टाट पल्टिदैं ! – Online National Network
चीनसँग कारोवार गर्ने १५० व्यापारीहरु टाट पल्टिदैं !
३० फाल्गुन २०७६, शुक्रबार ०३:२९
काठमाण्डौ, ३० फाल्गुन – चीनबाट समान आयात निर्यातको काम गर्ने करिब १५० वटा व्यवसायीक फार्म टाट पल्टिने अवस्थामा पुगेका छन् । उनीहरुको करिब २ अर्व रुपैंया डुब्न लागेको छ ।
समानको लागि एलसी खोलेर पैसा पठाइसकेका व्यवसायीहरु कोरोना भाइरसको कारण समान ल्याउन नपाएकोले उनीहरु विचल्लीमा परेको नेपाल चाइना चेम्बर अफ कमर्श एण्ड इण्डष्ट्रिजले जानकारी दिएको छ ।
संस्थाका अध्यक्ष त्रिभुवनधर तुलाधरले जनतापाटीलाई दिनु भएको जानकारीअनुसार फेब्रुअरी लागेपछि चीनबाट ‘वाइ एयर’मात्रै समान आइरहेको छ । सडक यातायातबाट समान आउन ठप्प छ । समान आयातको लागि त्यस अगाडि नै एलसी खोलेर पैसा पठाइसकेका व्यवसायीहरुका समान बोकेका करिब ३ सय कण्टेनर ट्रक केरुङ र खासा नाकामा अलपत्र परेका छन् । ‘अरु समान त ढिलो चांडो आउला, लसुन, प्याज, स्याउ जस्ता कृषि उपजहरु भने ट्रकमै कुहिन थालेकोले हामी चिन्तित भएका छौं । यस्तै अवस्था अझै केही दिन रहेमा नेपाली व्यवसायीहरुको विचल्ली हुने निश्चित छ’ तुलाधरको भनाइ छ ।
तुलाधरका अनुसार २ महिनाको अवधिमा चीन निकासीको लागि तयार गरिएका करिब ६० करोड रुपैंया बराबरको समान पनि अलपत्र परेको र त्यसबाट व्यवसायीहरु थप मर्कामा परेका छन् । एकातिर निर्यातको लागि ठिक्क पारिएको समान बेच्न नपाउनु, अर्काेतर्फ पैसा तिरे चीनमा लोड गरिएका कण्टेनरहरु सीमा नाकामा अलपत्र पर्नु । चीनसंगको कारोवार गरिहेका नेपाली व्यवसायीहरु दोहोरो मर्कामा परेका छन् ।
नेपाली व्यवसायीहरुले धेरैजसो समान चीनको ग्वाङजाउ, साङघाई, च्याङग्सु, सियान आदी ठाउंबाट ल्याउने गर्छन् । ती ठाउंहरुबाट पहिले नै समान लोड गरिएका ट्रक केरुङ र खासा आइ नपुग्दै कोरोना भाइरसको त्रास उत्कर्षमा पुगेपछि नाकाहरु बन्द गरिएको थियो । त्यसले गर्दा ती समानहरु नेपाल आइपुग्न सकेनन् । अहिले चीनको अवस्था सामान्य हुंदै गएकोले तिब्बत सरकारले ती समान लैजानको लागि नेपाली व्यवसायीहरुलाई सूचना पठाएको छ ।
तर, सीमा नाकाहरु खुलेका छैनन् भने नेपालमा पनि त्राही त्राहीको अवस्था छ । सरकारले पनि केही गर्न सकिरहेको अवस्था छैन । ‘फ्याट्ट केही भैहाल्यो भने त भैहाल्यो, त्यसैले कसैले पनि जोखिम मोल्न सक्ने अवस्था छैन । सरकारले पनि जोखिम मोलेर ती समान ल्याउनको लागि अनुमति दिने अवस्था छैन । हामीले पनि सरकारलाई दवाव दिन सक्ने अवस्थामा छैनौं । समस्या गंभिर छ, के गर्ने, के नगर्ने भैरहेको छ’ अध्यक्ष तुलाधरले भने ।